समाज लघुवित्त र लिवर्टी इनर्जीले सूचीकरण प्रकृया अघि बढाए, आगामी सातादेखि कारोबारमा आउने
भदौ ३१, काठमाडौं । भदौ १५ गते एकै दिन आईपीओ बाँडफाँट गरेका समाज लघुवित्त र लिवर्टी ईनर्जीले सूचीकरणका लागि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा प्रकृया अघि बढाएका छन् । दुवै कम्पनीले नेप्सेमा सूचीकरणका लागि निवेदन दिईसकेको र आगामी सातादेखि कारोबारमा आउने जानकारी दिएका हुन् ।
नेप्सेले पनि दुवै कम्पनीको आवश्यक कागजात सहितको निवेदन प्राप्त भई सूचीकरण प्रकृया अघि बढी सकेको जानकारी दिएको छ । सम्भवतः आगामी साताको पहिलो दिनसम्म सूचीकरण प्रकृया सम्पन्न भइसक्ने जानकारी नेप्सेले दिएको हो ।
समाज लघुवित्तले गत भदौ ४ गतेदेखि ८ गतेसम्म सर्वसाधारणका लागि आईपीओ विक्री गरेको थियो । समाज लघुवित्तले सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको रू. ८६ लाख बराबरको शेयर विक्री गरेको हो । अब धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुँदा संस्थापक समेतको गरी समाज लघुवित्तको कुल २ लाख कित्ता शेयर सूचीकृत हुनेछ ।
समाज लघुवित्तमा संस्थापकतर्फ ५७ प्रतिशत अर्थात् १ लाख १४ हजार कित्ता र सर्वसाधारणतर्फ ४३ प्रतिशत दरको ८६ हजार कित्ता शेयर कायम छ । समाज लघुवित्तले जारी पूँजी अनुसारको रू. २ करोड पूँजी सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरी पुर्‍याएको हो ।
त्यस्तै लिवर्टी ईनर्जीले संस्थापक र स्थानीय सहित सर्वसाधारणतर्फको गरी कुल १ करोड ५० लाख कित्ता शेयर नेप्सेमा सूचीकृत गराउनेछ । सर्वसाधारणलाई आईपीओ विक्रीपश्चात लिवर्टी ईनजीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब ५० करोड पुगेको छ । चुक्तापूँजीमा संस्थापकतर्फ ७५ प्रतिशत, सर्वसाधारण शेयरधनीतर्फ २५ प्रतिशत शेयर स्वामित्व कायम रहेको छ ।
लिवर्टी इनर्जीले प्रभावित स्थानीयका लागि साउन ७ गतेदेखि साउन २१ गतेसम्म र सर्वसाधारणका लागि भदौ ३ गतेदेखि ७ गतेसम्म आईपीओ विक्री गरेको थियो ।